၀၅:၀၂၊ ၂၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဖိုင်:စစ်တွေဒိစ်စတြိတ်ရှိ မရိုလူမျိုးများဆေးတံသောက်နေပုံ.jpeg ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (မြန်မာပြည်နှင့်တိုင်းသူပြည်သားများ -၁၃၀၁ခုနှစ်။ -စာမျက်နှာ,၃၇)
၀၅:၀၂၊ ၂၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:စစ်တွေဒိစ်စတြိတ်ရှိ မရိုလူမျိုးများဆေးတံသောက်နေပုံ.jpeg ကို upload တင်ခဲ့သည် (မြန်မာပြည်နှင့်တိုင်းသူပြည်သားများ -၁၃၀၁ခုနှစ်။ -စာမျက်နှာ,၃၇)
၀၄:၃၉၊ ၂၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဖိုင်:မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့တိဗက်မြန်မာအုပ်စု ဝင်ရောက်လာခြင်းကိုပြသောမြေပုံ.jpg ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (တိုင်းရင်းသားရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများ(ချင်း-၁၉၆၈)။)
၀၄:၃၉၊ ၂၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့တိဗက်မြန်မာအုပ်စု ဝင်ရောက်လာခြင်းကိုပြသောမြေပုံ.jpg ကို upload တင်ခဲ့သည် (တိုင်းရင်းသားရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများ(ချင်း-၁၉၆၈)။)
၁၁:၄၇၊ ၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ (Khami, Mro languages ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Language article.) စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၁:၀၆၊ ၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ Mro Language ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (languages added)
၁၄:၁၁၊ ၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ကဏ္ဍ:Articles needing expert attention with no reason or talk parameter ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဆောင်းပါးမှန်ကန်ကြောင်း လိုအပ်သည်များထည့်ရန်။) စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၃:၅၄၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဖိုင်:မြို လူမျိုး တို့၏(ဆာမ်ပါမ်) ပွဲ.jpg ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဤပုံသည် မြို လူမျိုး တို့ ၏ (ဆာမ်ပါမ်) ပွဲသည် ကြီးကျယ် ခမ်းနားဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ပုံ သည် Mru: Hill people border of Bangladesh ( Author Braun and Lofflor , 1990) အမည်ရှိ စာအုပ်မှ ယူထားခြင်း ဖြစါပါသ်။~~~~)
၁၃:၅၄၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:မြို လူမျိုး တို့၏(ဆာမ်ပါမ်) ပွဲ.jpg ကို upload တင်ခဲ့သည် (ဤပုံသည် မြို လူမျိုး တို့ ၏ (ဆာမ်ပါမ်) ပွဲသည် ကြီးကျယ် ခမ်းနားဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ပုံ သည် Mru: Hill people border of Bangladesh ( Author Braun and Lofflor , 1990) အမည်ရှိ စာအုပ်မှ ယူထားခြင်း ဖြစါပါသ်။~~~~)
၁၃:၀၇၊ ၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ မြိုမင်းဆက် ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဆောင်းပါးအသစ်ဖန်တီးသည်။) စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၄:၀၁၊ ၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ Mru Language ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဘာသာစကားတင်သည်။) စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၂:၁၆၊ ၈ ဇွန် ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ Mro (Unicode block) ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (မြိုယူနီကုတ်ထည့်သည်။)
၀၃:၄၂၊ ၃၀ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ မြိုနှစ်မြို ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဆောင်းအသစ်အဖြစ်ဖန်တီးမယ်) စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၂:၀၃၊ ၂၈ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ မေယုတောင်တန်း ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဆောင်းအသစ်တင်သည်) စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၀၆:၁၃၊ ၂၈ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဆွေးနွေးချက်:မြိုလူမျိုးဘာသာစကား ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဆွေးနွေးချက် ပို့သားသည်)
၀၅:၀၇၊ ၂၈ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ မြိုလူမျိုးဘာသာစကား ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဆောင်းပါးအသစ်စာမျက်နှ) စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၀၉:၃၁၊ ၂၆ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဖိုင်:၁၈၆၇ -ခုနှစ် က မြိုရုပ်ပုံ.jpg ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (A Politics of Nudity: Photographs of the 'Naked Mru'of Bangladesh ,p.354. Plate 6.'Young man of Mro or Mrung tribe'( Lewin,1867). Author: WILLEM VAN SCHENDEL.)
၀၉:၃၁၊ ၂၆ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:၁၈၆၇ -ခုနှစ် က မြိုရုပ်ပုံ.jpg ကို upload တင်ခဲ့သည် (A Politics of Nudity: Photographs of the 'Naked Mru'of Bangladesh ,p.354. Plate 6.'Young man of Mro or Mrung tribe'( Lewin,1867). Author: WILLEM VAN SCHENDEL.)
၀၈:၄၅၊ ၂၆ မေ ၂၀၂၀ ဆွေးနွေးချက်:မရူစာလူမျိုး စာမျက်နှာကို ဆွေးနွေးချက်:မြူလူမျိုး သို့ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုးက ရွှေ့ခဲ့သည် (အကြောင်းသည် မိမိကိုခေါ်သောအမည်ဖြစ်သည်)
၀၈:၄၅၊ ၂၆ မေ ၂၀၂၀ မရူစာလူမျိုး စာမျက်နှာကို မြူလူမျိုး သို့ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုးက ရွှေ့ခဲ့သည် (အကြောင်းသည် မိမိကိုခေါ်သောအမည်ဖြစ်သည်)
၀၄:၄၅၊ ၂၆ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဖိုင် ဆွေးနွေးချက်:မြိုကရာမာစာပေ.jpg ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဆွေးနွေးချက် ပို့သားခြင်း)
၀၄:၃၇၊ ၂၆ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဖိုင်:မြိုကရာမာစာပေ.jpg ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (MRO ST,a typeface for the Mro language,aChittagong Hill Tract Language Alphabet. Second Edition:August 2013 Self Published works and copyright@ 2013 Tom Sanalitro as apart of the Endangered Project.All right reserved. Printed and bound in the USA English Text Font:Scala. Author:Tim Brooks and Maung Nyeu.)
၀၄:၃၇၊ ၂၆ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:မြိုကရာမာစာပေ.jpg ကို upload တင်ခဲ့သည် (MRO ST,a typeface for the Mro language,aChittagong Hill Tract Language Alphabet. Second Edition:August 2013 Self Published works and copyright@ 2013 Tom Sanalitro as apart of the Endangered Project.All right reserved. Printed and bound in the USA English Text Font:Scala. Author:Tim Brooks and Maung Nyeu.)
၁၃:၄၄၊ ၂၅ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ် ဆွေးနွေးချက်:Infobox ethnic group ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဆွေးနွေးချက်တင်သည်)
၁၃:၂၆၊ ၂၅ မေ ၂၀၂၀ တမ်းပလိတ်:မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးများ စာမျက်နှာကို တမ်းပလိတ်:Infobox ethnic group သို့ ပြန်ညွှန်းပေါ်ထပ်၍ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က ရွှေ့ခဲ့သည် (ပြန်လည်ပြုြပင်သည်)
၁၃:၂၆၊ ၂၅ မေ ၂၀၂၀ ပြန်ညွှန်း တမ်းပလိတ်:Infobox ethnic group ကို ထပ်ပိုးရေးသားခြင်းဖြင့် Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က ဖျက်ပစ်ခဲ့သည် ("တမ်းပလိတ်:မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးများ" ရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက် ဖျက်ပစ်ခြင်း)
၁၃:၀၉၊ ၂၅ မေ ၂၀၂၀ တမ်းပလိတ်:Infobox ethnic group စာမျက်နှာကို တမ်းပလိတ်:မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးများ သို့ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုးက ရွှေ့ခဲ့သည် (တမ်းပလိတ်ခေါင်းစဥ်ရွှေ့သည်)
၁၃:၀၄၊ ၂၅ မေ ၂၀၂၀ တမ်းပလိတ်:Infobox ethnic group စာမျက်နှာကို တမ်းပလိတ်:မြန်မာပြည်လူမျိုးများ သို့ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုးက ရွှေ့ခဲ့သည် (တမ်းပလိတ်ခေါင်းစဥ်ရွေ့ခြင်း)
၁၂:၄၃၊ ၂၅ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ မော်ဂျူး:Infobox/doc ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (စမ်းသပ်ကြည့်သည်)
၁၀:၄၆၊ ၂၄ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဆွေးနွေးချက်:မြိုကရာမာစာပေ ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဆွေးနွေးချက်တင်သည်)
၁၀:၄၄၊ ၂၄ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ မြိုကရာမာစာပေ ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဆောင်းပါးသစ်အတွက်) စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၀၅:၀၀၊ ၂၄ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ မြိုစာပေ ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဆောင်းပါးအသစ်အတွက်) စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၂:၅၉၊ ၂၂ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဖိုင်:မြိုအမျိုးသား ရိုးရာဝတ်စားနှင့် တေးမှုတ်သူများ.jpg ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ရှေး ရှေးက မြိုလူမျိုး ရိုးရာဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် မြိုလူမျိုးပင်ကိုယ်တေးမှုတ်တုရိယာတေးမှုသည့်အဖွဲ့ မြိုဘာသာခေါ်(ပလုံ))
၁၂:၅၉၊ ၂၂ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:မြိုအမျိုးသား ရိုးရာဝတ်စားနှင့် တေးမှုတ်သူများ.jpg ကို upload တင်ခဲ့သည် (ရှေး ရှေးက မြိုလူမျိုး ရိုးရာဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် မြိုလူမျိုးပင်ကိုယ်တေးမှုတ်တုရိယာတေးမှုသည့်အဖွဲ့ မြိုဘာသာခေါ်(ပလုံ))
၁၂:၂၄၊ ၂၂ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဖိုင်:Mro Language Book.png ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (မြိုပင်ကိုယ်စာပေ ၁၉၈၀ ခုနှစ် မှ မန်လေမြို အား ကောင်းကင်တမန် မြိုလူမျိုးအတွက်ပေးထားသော ကရာမာစာ။)
၁၂:၂၄၊ ၂၂ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Mro Language Book.png ကို upload တင်ခဲ့သည် (မြိုပင်ကိုယ်စာပေ ၁၉၈၀ ခုနှစ် မှ မန်လေမြို အား ကောင်းကင်တမန် မြိုလူမျိုးအတွက်ပေးထားသော ကရာမာစာ။)
၀၉:၃၆၊ ၂၂ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဖိုင်:Manley Mro.jpg ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (မြိုစာပေ နှင့် မြိုကရာမာဘာသာကိုစတင်တည်ထောင်သူမန်လေမြိုဖြစါသည်။)
၀၉:၃၆၊ ၂၂ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Manley Mro.jpg ကို upload တင်ခဲ့သည် (မြိုစာပေ နှင့် မြိုကရာမာဘာသာကိုစတင်တည်ထောင်သူမန်လေမြိုဖြစါသည်။)
၀၇:၃၇၊ ၂၂ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဖိုင်:မန်လေ မြိုပုံ.jpg ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဤပုံသည်သည် မြိုလူမျိုးတို့၏ ြမိုကရာမာဘာသာ ကို တည်ထောင်သူြဖစ်သည်။)
၀၇:၃၇၊ ၂၂ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:မန်လေ မြိုပုံ.jpg ကို upload တင်ခဲ့သည် (ဤပုံသည်သည် မြိုလူမျိုးတို့၏ ြမိုကရာမာဘာသာ ကို တည်ထောင်သူြဖစ်သည်။)
၀၅:၃၈၊ ၂၂ မေ ၂၀၂၀ ဆွေးနွေးချက်:ကရာမာ ဘာသာ စာမျက်နှာကို ဆွေးနွေးချက်:မြိုကရာမာ ဘာသာ သို့ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုးက ရွှေ့ခဲ့သည် (ဤခေါင်းစဥ်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သိတာ ထင်ရှားစေသော ခေါင်းစဥ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်)
၀၅:၃၈၊ ၂၂ မေ ၂၀၂၀ ကရာမာ ဘာသာ စာမျက်နှာကို မြိုကရာမာ ဘာသာ သို့ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုးက ရွှေ့ခဲ့သည် (ဤခေါင်းစဥ်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သိတာ ထင်ရှားစေသော ခေါင်းစဥ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်)
၀၅:၂၀၊ ၂၂ မေ ၂၀၂၀ ဆွေးနွေးချက်:နတ်ဘာသာ စာမျက်နှာကို ဆွေးနွေးချက်:နတ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု သို့ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုးက ရွှေ့ခဲ့သည် (ဤခေါင်းစဥ်အားဆွေးနွေး မှုကြောင်းအများသဘောတူရွှေ့ပြောင်းလိုက်သည်)
၀၅:၂၀၊ ၂၂ မေ ၂၀၂၀ နတ်ဘာသာ စာမျက်နှာကို နတ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု သို့ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုးက ရွှေ့ခဲ့သည် (ဤခေါင်းစဥ်အားဆွေးနွေး မှုကြောင်းအများသဘောတူရွှေ့ပြောင်းလိုက်သည်)
၁၄:၁၃၊ ၂၁ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဆွေးနွေးချက်:နတ် ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဆွေးနွေးချက် ပို့သားခြင်း)
၁၃:၃၈၊ ၂၁ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဆွေးနွေးချက်:ကရာမာ ဘာသာ ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဆောင်းပါးအသစ်ရေးတင်သည်။)
၁၃:၃၃၊ ၂၁ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ကရာမာ ဘာသာ ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဆောင်းပါးအသစ်ဖန်တီးရန်) စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၀၉:၅၁၊ ၂၁ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဆွေးနွေးချက်:နတ်ဘာသာ ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ဆွေးနွေးချက်တင်ခြင်း)
၀၉:၄၉၊ ၂၁ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ နတ်ဘာသာ ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (နတ်ဘာသာဆောင်းပါးရေးပါမည်။)
၁၃:၄၉၊ ၁၉ မေ ၂၀၂၀ Moyezan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဖိုင်:မြိုလုမျိုးနေထိုင်ရာ ဒေသပြမြေပုံ.jpg ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (မြိုလူမျိုးများတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအပြင် ဘၐ်လားဒေရ့် စစ်တကောင်း တောင်တန်းဒေသနှင့် အိနိယနိုင်များတွင်နေထိုင်ကြသည်~~~~)
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:မှတ်တမ်း/Moyezan" မှ ရယူရန်